အတူတူငါတို့ပထမလ :) | FromLinux | ChrisADR Linux မှ
ChrisADR | | NOTICIAS, အခြား
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရပ်ရွာထဲတွင်တစ်လမျှပါဝင်ခဲ့ကြသောကြောင့်ဤသည်အခမ်းအနား၏သေးငယ်သောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ 🙂ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောအကြောင်းအရာကိုမတင်ရန်နှင့်၎င်းကိုသေးငယ်သောထင်ဟပ်မှုများနှင့်မှတ်ချက်များဖြင့်ချန်ထားခဲ့မည်ဖြစ်ရာ ထပ်မံ၍ အသေးစိတ်မပြောပါနှင့်၊
2.1 တက္ကသိုလ် / ကောလိပ် / ကောလိပ်သည်အစဖြစ်သည်
2.2 GNU / Linux ကို GNU / Linux ကိုသုံးရုံသာမကဘဲဖန်တီးရန်သင်ယူပါ
ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်စတင်လိုသောအရာဖြစ်သည် is အမှန်တရားကိုပြောရန်၊ တစ်စုံတစ်ရာအတွက်ပထမခြေလှမ်းကိုလှမ်းဖို့အမြဲခက်ခဲသည်၊ Gentoo သို့ကျွန်ုပ်ပထမ ဦး ဆုံးပို့ခဲ့သောအီးမေးလ်ကိုသတိရ။ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ ၀ င်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ပထမတော့ ... ဒီလိမ္မာပါးနပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်သူအားလုံးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ။ o ငါရပ်ရွာနှင့်အတူတက်စောင့်ရှောက်မည်နည်း o ငါသူတို့နှင့်ကောင်းစွာဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့နားမလည်နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်... ဒါမှမဟုတ်စိတ်ထဲပေါ်လာနိုင်တဲ့နောက်ထပ်တစ်ထောင်တစ်ခု
သို့သော်အဖြစ်မှန်မှာ၎င်းတို့သည်အခြားကမ္ဘာမှလူများမဟုတ်ပါ၊ မည်သည့်နေရာမှမကိုက်ဘူး (သို့) တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိပါ (အချို့သည်အနည်းငယ်စိတ်ဆိုးစရာကောင်းလိမ့်မည်😛သို့သော်နေရာတိုင်း၌ဖြစ်ပျက်နေသည်🙂) ။ ဤသည်ကကျွန်ုပ်သည်ထိုအီးမေးလ်ကိုပို့ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်တစ်လခွဲခန့်အကြာမှပါ ၀ င်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း.
ဒီလှပတဲ့သင်ယူမှုအတွေ့အကြုံကကျွန်တော့်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူစေခဲ့တယ် CodeLaboraGit မှာစလုပ်ပါ၊ ဒီနေရာမှာစာစရေးပါ၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိသည့်အချိန်များများစပါသည် ငါမျှဝေဖို့တန်ဖိုးရှိတစ်ခုခုရှိခဲ့ပါတယ်စီမံကိန်းအသစ်များစတင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူခဲ့သည်။
သို့သော်လည်းငါသည်အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြောသနည်း ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်၊ မင်းရဲ့ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည် time ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်အချိန်၊ ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းနှင့်ရံဖန်ရံခါအမှား (ကျွန်ုပ်တို့ဂရုစိုက်လျှင်များများစားစား) ကိုဆိုလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်မငြင်းဆိုပါ။ သို့သော်တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့တစ်ခုခုလှူဒါန်းခြင်း၏ခံစားချက်သည်အလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းပါသည်။ သင်၏အသိုင်းအဝိုင်း၊ အဖွဲ့အစည်း / တက္ကသိုလ် / အလုပ် / စသည်တို့တွင်စတင်ပူးပေါင်းရန်တစ်ခုထက်ပိုသည်။
ဒါကြောင့်သင်ဟာသိပ်မသိရရင်အရေးမကြီးပါဘူး။ ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိဘူး။ 🙂ပါဝင်ခြင်းသည်သင်ယူရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အသိုင်းအဝိုင်းတွင်ရှိခြင်းသည်လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးသူများထံမှသင်ခန်းစာရစေသည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံသည့်လမ်းကြောင်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ 🙂၎င်းသည် CodeLabora နှင့်ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ် (အချို့က၎င်းကိုအီးမေးလ်ပို့။ ) ၎င်းသည်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေနိုင်သောနေရာဖြစ်သည်🙂
ဤအရာသည်အသက်အငယ်ဆုံးအတွက်ဖြစ်သည် (hehe ငါငယ်လွန်းလွန်းသောကြောင့်ဤအရာကိုပြောနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ) သို့သော်၎င်းသည် developer တစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အရေးကြီးဆုံးသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်သည်။
တက္ကသိုလ် / ကောလိပ် / ကောလိပ်သည်အစဖြစ်သည်
ဘယ်တော့မှ တက္ကသိုလ် / တက္ကသိုလ် / သင်ကသင်ပေးသည့်အရာသည်လုံလောက်သည်ဟုယုံကြည်သည်။ ငါမကြာသေးမီကယူအက်စ်အေရှိသူတို့အားမြင့်မားသော developer လစာအနည်းငယ် demystified ကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပါ။ ထို့အပြင်သူတို့သည်ဆီလီကွန်တောင်ကြား၌သာထိုမြင့်မားသောလစာကိုပေးဆပ်ရန်တတ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ မူဘောင်တစ်ခု (သို့) စာကြည့်တိုက်တစ်ခုကိုမည်သို့မည်ပုံအသုံးပြုရမည်ကိုသိခြင်းသည်သင့်အားထိုသို့သောအလုပ်၏အဆင့်သို့ရောက်စေမည်မဟုတ်ပါ။ ပြီးတော့ဒါကအရာတွေကိုသင်ယူတဲ့အခါငါ့ကိုအများကြီးလှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်
GNU / Linux ကို GNU / Linux ကိုသုံးရုံသာမကဘဲဖန်တီးရန်သင်ယူပါ
ရှိပြီးသားတီထွင်ထားသော "superuser" ဟူသောဝေါဟာရကို (ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်မဟုတ်) အမြစ်) ။ ဒီအရ စူပါအသုံးပြုသူများ ၎င်းတို့သည် tools များမှန်ကန်စွာအသုံးချနိုင်ရုံသာမကအခြေအနေများနှင့်အညီ၎င်းတို့ကိုဖန်တီးခြင်းသို့မဟုတ်ပြုပြင်ခြင်းပြုလုပ်သောအုပ်ချုပ်သူများ၊ developer များ / အသုံးပြုသူများဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိမည်သည့်ဘာသာစကား / မူဘောင် / ကိရိယာတွင်မဆိုသက်ဆိုင်သည်။ ဖြစ်ရန် မှီခို တစ်စုံတစ် ဦး ပျင်းရိသည် ၎င်းကိုနားလည်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့အလုပ်သို့မဟုတ်နည်းပညာအသုံးပြုသောကျွန်ုပ်တို့သည်အကြီးမားဆုံးသောဘေးဆိုးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်မှီခိုနိုင်သည့်အရာများနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုသို့မလုပ်ခြင်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးခြင်းသို့မဟုတ်ဖန်တီးရန်အချိန်ကုန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤအာမခံသည်ရံဖန်ရံခါ "ပြင်ဆင်ခြင်း" မှတ်ချက်ပေးမည့်အချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူရမည်။ နှစ်သိမ့်မှုဇုန်သည်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ အသစ်သောအရာများသင်ယူစရာမလိုပဲနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်နည်းပညာကိုအတူတကွရပ်တန့်ခြင်း နေ့စဉ်နေ့တိုင်း (ကျွန်ုပ်တွင်လည်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်မလိုအပ်သောရာသီများလည်းရှိသည်၊ ပုံမှန်ဖြစ်သည်) သို့သော်စိတ်ကူးသည်အမြဲတမ်းသတိရှိရန်ဖြစ်ပြီး“ တည်ငြိမ်မှု” သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိသည်။
မင်းဒီဘွဲ့ရထားတဲ့တက္ကသိုလ် / အဖွဲ့အစည်းကအရေးကြီးတယ်လို့လူအများကပြောကြလိမ့်မယ်ဆိုတာငါသိချင်လို့ပါ၊ ဒါကိုငါအလေးပေးချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့တစ်ယောက်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လုပ်ရမယ့်အလုပ်အားလုံးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သေးငယ်တဲ့အပိုင်းပဲ ကမ္ဘာပေါ်မှာ။ ဒီအချက်နဲ့ပါတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကအသင်း ၀ င်တွေအပေါ်အယုံအကြည်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် MIT မှဘွဲ့ရရန်မလိုကြောင်းနည်းပညာအဆင့်မှာပြသရန်အတွက်လေ့လာနေဆဲလူများကိုလည်းအားပေးပါတယ်။
ဒါကဖြစ်ပါသည် ဗီဒီယို အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုပါ ၀ င်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသာမကဘဲကျွန်တော့်ဘဝမှာကိုယ်စားပြုတဲ့အရာတွေကိုပါစိတ်လှုပ်ရှားစေပါတယ်။ ငါအိပ်ရာထတိုင်းနေ့တိုင်းအိပ်ရာထရန် ((အမြဲတမ်းကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်😛) ကြိုးစားသည်၊ ဘယ်သောအခါမှဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်အရာမှာထိုနေ့၏အဆုံးတွင်မျှော်လင့်မထားသေးသော်လည်း၎င်းသည်ငါဝယ်ယူထားသောအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အချိန်။ ဗွီဒီယိုကိုအစမှအဆုံးအထိကြည့်ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်🙂
ငါဒါကိုကြာမြင့်စွာကလေ့လာခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ Gentoo မှာအားဖြည့်ထားတယ်။ သင်သည်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းအမြဲသတိရပါ၊ ယနေ့ငါ Gentoo ကိုကိုယ်စားပြုသည်၊ ငါပီရူးကိုကိုယ်စားပြုသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် CodeLabora နှင့်အခြားလူအများနှင့်နေရာများကိုယခုမှတ်သားရန်အလွန်ရှည်လျားသောနေရာများရှိကြောင်းသတိရပါ၊ သို့သော်တစ်ခုမှာရှင်းနေပါသည်။
သင်ရေးသား၊ ပြောသည့်အရာများကိုအချိန်အတော်ကြာထားရှိကြောင်းအမြဲတမ်းသတိရပါ။ တစ်သက်တာကုန်လွန်သွားပြီးနောက်ထိုလုပ်ဆောင်မှု (သို့) စကားလုံးအားဂုဏ်ယူစွာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်အောင်အရာအားလုံးကို ပြော၍ ပြုရမည်။ အနာဂတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်
ငါဒီဆောင်းပါးတိုကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်၊ ငါအများကြီးမျှဝေလိုသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဒီနေ့အတွက်လုံလောက်ပါသည် ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ရန် သင်တို့အသီးအသီးအားဤ FOSS ကမ္ဘာကြီးသို့ဤသေးငယ်သောပံ့ပိုးမှုများကိုဖတ်ရန်၊ မျှဝေရန်၊ မှတ်ချက်ပေးရန်အချိန်ယူရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုအမြဲတမ်းတုံ့ပြန်ရန်ကြိုးစားပြီးရှင်းလင်းချက်လိုအပ်လျှင်ကျွန်ုပ်ပြောသောစကားများအပေါ်သံသယမဖြစ်စေရန်ကြိုးစားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်မှတ်ချက်ပေးလိုပါကမျှဝေပါ၊ တည့်မတ်ပါ၊ ထိုသို့လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပါ။ this အတူတကွအတူတူဤကြီးမားသောအချိန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါကဤအရာသည်ဤထက် ပို၍ ကြာရှည်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အခြား » အတူတူငါတို့ပထမလ
eduardo Vieira သို့ပြန်သွားပါ
Andrew Villegas Mendez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရှိသောကိုလံဘီယာမှနှုတ်ခွန်းဆက်စကား၊ ကျွန်ုပ် Linux အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အမြဲတမ်းရှာဖွေနေပါတယ်။ Linux လောကနဲ့ဗဟုသုတတိုးပွားအောင်ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲ၊ ငါတို့လိုကြီးထွားလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးတိုးတက်စေတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Andres Villegas Mendez အားပြန်ကြားပါ
Gabriel တံတား ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော့်နာမည် Monterrey မက္ကစီကိုမှနှုတ်ခွန်းဆက်သခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်အားအသိပေးလိုပါသည်။ သင်၏ပံ့ပိုးမှုများအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်အားအမြဲကူညီပေးခဲ့ပါပြီး၊ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်နှင့်သင်နှင့်နောက်ကွယ်ရှိသူများအားလုံးကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါသည်။
Gabriel Puente ကိုပြန်ပြောပါ
ကားလို့စ် Arturo Gonzalez Rubio Gavarain ဟုသူကပြောသည်
ဟုတ်တယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုပေးလိုက်တယ်။ မင်းဟာကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနေပြီ။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Carlos Arturo Gonzalez Rubio Gavarain အားပြန်ပြောပါ
အားလုံးမင်္ဂလာပါ your မင်းရဲ့အပြောအဆို၊ အားပေးမှုတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာကူညီပေးတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အပြင်ကျွန်တော့်ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ဖို့နဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုပြင်ဖို့အချိန်ယူတဲ့ပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်ကိုအထူးကြိုဆိုပါတယ်။ ငါမြန်မြန်ရေးသည့်အခါဖြစ်ပျက်ခြင်း😛ဖတ်ရန်နှင့်မျှဝေရန်အချိန်ယူရသည့်အတွက်သူနှင့်သင့်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
နေရာကောင်း အလွန်လှုံ့ဆော်မှု! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!!
console မှ NBA ရလဒ်များကိုကြည့်ပါ